Real Madrid oo Markii Seddaxaad xariira ku Guuleysatay Koobka Kooxaha Adduunka+SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo Markii Seddaxaad xariira ku Guuleysatay Koobka Kooxaha Adduunka+SAWIRRO
CR Shariif December 22, 2018
( Abu Dhabi ) 22 Dis 2018. Real Madrid ayaa si sahlan ku hanatay markoodii seddaxaad oo xariira koobka kooxaha adduunka kaddib markii ay 4-1 kaga badiyeen Al-Ain finaalka tartanka.
Cayaarta ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-0 oo ay ku hogaanimeysay Real Madrid waxana goolasha u daar furay Luka Modric.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad Madrid ayaa dheereysatay goolasha hogaanka waxaana daqiiqadii 60-aad goolka labaad u dhaliyay Marcos Llorente ka hor inta uusan goolka seddaxaad dhalin Sergio Ramos.
Kooxda Emirates ka dhigan dhisan ee Al-Ain ayaa la timid goolka calanka waxaana u dhaliyay Tsukasa Shiotani.
Waxaana ugu dambeyn goolasha Los Blancos uu afjaray laacibka Brazil ee Vinicius Junior oo sabab u ahaa goolka afaraaf oo uu iska dhaliyay laacibka Al-Ain Yahia Nader.
Waa koobkii u horreeyay uu kooxda ku hogaamiyay Santiago Solari halka sido kale ay kooxda Real koobkan hanatay markii seddaxaad oo xariira iyo Markii afaraad oo ay koobkan qadaana kaddib 2014, 2016,2017,2018.
Arsene Wenger oo isku diyaarinaya inuu noqdo badalka Gattuso ee kooxda AC Milan